Mayelana NATHI - Huaian Huafu Special Casting Nylon Co., Ltd.
I-H & F · INYLONI
I-Huaian Huafu Special Casting Nylon Co, ltd, esungulwe ngo-2007, etholakala e-huai'an city, idolobha likaNdunankulu wokuqala wase-China, i-zhou en lai igxile ekukhiqizeni imikhiqizo ehlukahlukene ye-nylon kufaka phakathi i-pulley, i-Slider, i-Gear, i-Roller, imikhono , ikheshi isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo, indophi Umhlahlandlela nazo zonke izinhlobo zezinto ezikhethekile ezimise inayiloni izingxenye nezinye izinsimbi.
I-Huafu ikhiqiza ikakhulukazi imikhiqizo ehlukahlukene ye-castle efaka ama-nylon pulleys, umhlahlandlela wezintambo ze-nylon, igiya lenayiloni, i-gasket yenayiloni, ibha yenayiloni, isilayida senayiloni, i-roller roller kanye nezingxenye ezahlukahlukene ezikhethekile eziyimilo yenayiloni. Phakathi nentuthuko engaphezu kweminyaka eyishumi, uHuafu usethuthuke waba ngomunye wabaphakeli abaphezulu bemikhiqizo yenayiloni enabasebenzi abangaphezu kwekhulu okubandakanya onjiniyela abayishumi nesishiyagalombili kanye nenani elingaphezu konyaka lokukhipha lama-dollar ayizigidi eziyishumi.
◉: Intengo yokuncintisana kakhulu
◉: Ukulethwa oku-oda okusheshayo
◉: Uhlelo lokulandelela ikhwalithi evuthiwe
◉: Kwenziwe ngentando imikhiqizo inayiloni
◉: Isevisi yokulinda amahora angu-24
◉: ochwepheshe iqembu lobuchwepheshe
Isidingo semikhiqizo yeNayiloni sikhula kakhulu Njengentuthuko yomnotho womhlaba kula mashumi eminyaka amuva nje. Imikhiqizo yeNayiloni, Njengempahla engenakubuyiselwa endaweni yeklabhu yemikhiqizo yepulasitiki, isetshenziswe kabanzi endaweni yobunjiniyela ngokufaneleka kwayo okuhlukile.
Ama-pulleys enayiloni asetshenzisiwe ku-elevator ngomsindo wawo ophansi, ukuzithambisa, ukuvikela i-wirerope nokwelula impilo yenkonzo yayo yonke imishini.
Futhi imikhiqizo yenayiloni isetshenziswa ku-crane njenge-pulley, i-rope guider ukunciphisa ukungqubuzana nokunciphisa isisindo sonke semishini, nemishini efakwe ngeyiloni nayo ingasetshenziswa ethekwini lapho kusebenza khona imvelo enomswakama.
ITower crane ibamba iqhaza elibalulekile ekwakhiweni kwamadolobha, kanti izindlu nezakhiwo zihlanganisa ngaphezu kwe-10% yomnotho womhlaba. Ama-pulleys enayiloni ayizingxenye ezingenakubuyiselwa enqubeni yokukhiqiza i-crane crane futhi angathwala cishe umthamo ofanayo uma kuqhathaniswa nama-pulleys ensimbi.
Uma kuqhathaniswa ne-gasket yensimbi, i-nylon gasket ine-insulation enhle kakhulu, ukumelana nokugqwala, ukufudumeza ukushisa, izakhiwo ezingezona kazibuthe, isisindo esilula. Ngakho-ke isetshenziswa kakhulu ku-semiconductor, imoto, imboni ye-aerospace, umhlobiso wangaphakathi nezinye izinkambu ezihlobene.
Ngaphezu kwakho konke, njengoba isikhathi siqhubeka, imikhiqizo eminingi yenayiloni izokhiqizwa futhi isetshenziswe ezindaweni eziningi. Ngokufaneleka kwayo okuhle, izingxenye zenayiloni kancane kancane zishintsha izingxenye zensimbi. Futhi lo mkhuba futhi uyasiza nasekuthuthukisweni kwemvelo. Ngethemba ukuthi amakhasimende ethu angaxhumana nathi, uHuafu Nylon`ukuhlangabezana nezidingo zakho zomkhiqizo wenayiloni. Sisonke sandisa ibhizinisi lethu, sakha ubudlelwane bokusebenzisana obuzinzile.